वर्षा राउत भन्छिन्- 'पंखाअगाडि कपाल हल्लाउँदै नाच्थेँ'म्युजिक भिडियोमा व्यस्त मोडल हुन्, वर्षा राउत। तीन वर्षमा उनले ८० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छिन्। भिडियोबाट पाएको लोकप्रियताकै कारण उनले फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा काम गर्ने...	तालीको भोको टोन ट्रिएङ्गलटोन ट्रिएङ्गल।नामैले प्रस्ट छ– यो तीन सदस्यको सांगीतिक समूह हो। पर्कसनिस्ट पुनम सापकोटा, गिटारिस्ट विशालविक्रान्त अधिकारी र भोकलिस्ट तथा गिटारिस्ट राकेश महत यसमा आबद्ध छन्। ब्यान्ड डेढ वर्षअघि फर्म भएको...	पत्रकारिताका गुरुका नजरमा शुक्रवारप्रा. पी खरेलमेरो विचारमा नेपालबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये विविधता, लेखनशैली, चित्र प्रयोगका हिसाबले शुक्रवार अब्बल पत्रिकामा पर्छ। बजारमा थुप्रै पत्रिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा शुक्रवार प्रकाशनमा आएको थियो। अप्सनाको 'बोल्ड' वाणीकेही समयअघि शुक्रवार सुन्दरीका रूपमा छापिएकी अप्सना थापाको तस्बिर हेरेर धेरैले 'हट पोज' भनेर कमेन्ट गरेका थिए। त्यतिबेला मोडलमात्रै रहेकी अप्सना यतिबेला हिरोइन हुन खोज्दै छिन्। मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेन
ध.च. गोतामे म बसेको सानो शहरमा पहिलो पल्ट सिनेमा आयो। त्यसबखत सिनेमालाई 'बाइसकोप' भन्दथे, किनकि प्रदर्शन कालमा बाइस पटक मध्यान्तर हुन्थ्यो र प्रत्येक मध्यान्तरमा सिनेमाका कारिन्दाहरूले दर्शकहरूको कोप सहनुपर्थ्याे। गरिब बाइसकोप पनि के गरोस्? उसित छवि देखाउने एउटै मेसिन हुन्थ्यो। विस्तृतमा
12 May 2016 बिहीबार ३० बैशाख, २०७३
सम्पादकीय संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषयहरू ओझेलमा पारिएका छन्। यसअघिका सरकारले जस्तै यसपटक पनि जनतालाई अलमलमा पार्ने चिल्ला कुरा गरेर वर्तमान सरकार जनपक्षीय देखिने धुनमा जुटेको देखिन्छ। विस्तृतमा
ईश्वर दाहाल मान्छेले जंगलदेखि महलसम्मको यात्रा पार गर्न हजारौँ साल लगायो। यति लामो अनुभव र अभ्यासले समाज, छरछिमेक र इष्टमित्रको आश्यकता र अनिवार्यतालाई सिद्ध गर्योा। छिमेक भएन भने बस्न सकिन्न। आफन्त भएनन् भने जीवन स्वादिलो हुँदैन। तर, संसारमा सवैभन्दा तनाव पनि छिमेकी… विस्तृतमा
मोहनकुमार दाहाल नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा नेपाली कांग्रेसले आफू सत्ताको नयाँ समीकरणमा नअट्ने र पछाडि धकेलिने संकेत पाइसकेको घटनाक्रमले प्रस्ट्याएका छन्। संविधान जारी गर्ने मिति केही समय पछि सार्ने कांग्रेसको इच्छा पूरा हुन सकेको थिएन। त्यसले उसको आकलनलाई बल पुर्‍याएको हुनुपर्छ।… विस्तृतमा
नागरिक कुनै गीत तयार भएपछि त्यसलाई आम दर्शक र स्रोतामा पुर्याउन म्युजिक भिडियो बनाउने गरिन्छ । गीतको भाव र सन्देशलाई दृश्यमा उतार्न सक्ने क्षमता भएका कलाकारलाई भिडियोमा अभिनय गराउनुपर्ने हो । तर, भद्रगोल यहीँनेर भइरहेको छ । म्युजिक भिडियो विकृतिको क्षेत्र… विस्तृतमा